परदेशमा बसेर देशको बारेमा लेख्दा, बोल्दा कहिलेकाहि मन भक्कानिन्छ । लामो परदेश यात्राले सिकाएको अनुभव र देशको मायाले नबोलिरहन पनि मन मान्दैन् । यो विदेशी भुमिमा यो मनले प्रत्येक दिन आफ्नो मातृभुमिमा फर्कने समय कुरेर बसेको छ । तर जुन परिस्थितीमा देश छोडियो, जुन अब्यवस्थाका कारण विदेशिनु परेको थियो त्यसमा कुनै सुधार त के सुधारको प्रयास पनि शुरु भएको छैन् । अझ अबस्था दिनप्रतिदिन बिग्रदो र झन अन्यौताको अबस्था छ ।
देशको ठुलो हिस्साा अहिले पनि कृर्षिमा निर्भर छ । हाम्रा पुर्खाले कोरीदिएका साँध सिमाना भित्रका ति पाखोबारीहरु उजाडिएका छन् । स्याहार सम्भार र मलजलको अभावमा सारा बरबगैचा तथा रुख विरुवाहरु मृत अवस्थामा छ । विदेशमा आर्जेको थोरै धन भए पनि आफ्नै ठाँउमा लगानी गर्नुको साटो शहरको घरघडेरी र विलासितामा खन्याउने प्रवृतिले हाम्रा त्यही हाम्रा पुर्वजको नासोको समेत अस्थित्व मेटिने अबस्था पुगेको छ ।
गाउँबासीहरु सबै शहरमुखी भए । सरकारी योजनाहरु पनि सबै शहर केन्द्रित भए । घुम्ने कुर्ची माथि बसेर गरेको मात्र कामलाई मात्रै काम भन्ने र युरो, डलर, पाउण्ड, र येन मात्र पैसा हो भन्ने सँस्कारको विकाश हुँदै गएको छ । नागरिक चेतनशिल नभएसम्म देशलाई पैसै पैसाले पुरे पनि देश बन्दैन् । प्राविधिक शिक्षालयका अवधारणाहरु सिमित क्षेत्रमामात्र नगराइ प्रत्येक गाउँगाउँमा खोली दिएर हरेक घरघरमा एउटा प्राविधिक जन्माईदिएमा देश र समाज कस्तो हुन्थ्यो होला ? हामी परदेशीयका हरेक नागरिकले पनि देश विदेशमा घुम्दाको शीप अनुभव र चेतनालाई छिमेकी र समाजमा कोशेलीको रुपमा भित्र्याउदै एउटा चेतनसिल समाजको स्थापना गर्न पाए देश कस्तो हुन्थ्यो होला ? हुनत हामी विदेसिएका नेपालीहरुको पीर र ब्यथाको कथा पनि कम मार्मिक छैन । सवैको आआफ्नै पीडा छ । बल र उमेर छंदै आफ्नो लागि केही धनको जोहो गर्न सकिएन भने भोली देशले मेरो नागरिक भोकै भयो भनेर खान लाउन दिने अवस्था छैन ।
जन्म दिएका छोराछोरीको लागि निभाउनु पर्ने जिम्मेवारी बेग्लै छ । मातृभूमि प्रतिको माया र संम्झनाको साक्षी त विदेसीयका हरेक नागरिकहरुको मजबुरी र समर्पणले देखाउंछ । देशलाई यो अवस्थामा पु¥याउनमा नेता तथा कर्मचारीको भूमिका छुट्टै होला तर राष्ट्रप्रति योगदान र कर्तब्यको सवालमा हामी नागरिकको जिम्मेवारी पनि नेता तथा कर्मचारीको भन्दा कम छैन । जन्मभूमिको माया मनभरी भएपनि देश र समाजको परिस्थिती वा बाध्यताले गर्दा सेवा र समर्पणको भावना मन भित्र नै गुम्स्याएर राखेका छन् । स्वदेशमा बसेका नागरिकहरु विदेश जाने ध्याउन्नमै मस्त छन् । विदेश पुगिसकेका नागरिकहरु कसरी विदेशमै घरजम गरिखाने हो भनेर तानाबाना बुन्न मै ब्यस्त छन् । बन्द परिधी भित्रको कोलाहलमा आफुलाई समर्पित गर्दैगर्दा हिजो आज किन हो यस्तै राष्ट्रिय एवं देशभक्ति भावनामा तरङ्गित हुदै छचल्किन खोज्छन् । के साच्चै नै हामी सारा विदेसिएका नेपालीहरुले राष्ट्रको लागि केहि गर्नलाई मातृभूमि नै फर्किए भनेपनि के यो सम्भव होला त मातृभूमिकै लागि त्याग बलिदान र योगदान गर्नुपर्छ भन्ने सोच र भावना त मानवीय सम्वेदनाकै सबै भन्दा सुन्दर पक्ष हो । देशको लागि समर्पण गर्न खोज्ने र गरिरहेका राष्ट्रका सैयौ सम्मानिन नागरिकहरुको योगदान र विचारलाई आत्मसाथ गर्ने हो ।
यो विदेशीको न्यास्रो लाग्दो जीवनलाई सदाकालाई छोडेर तुरन्तै मातृभूमिको काखमा समर्पण गर्ने भावनाको वेग उर्लिएर आउछ तर यो जन्मभूमिमै केही गरौ भन्ने देशभक्तिको भावना आफु भित्र हुँदाहुँदै पनि एक किसिमको असुरक्षा महसुश हुने गर्दछ । । हाम्रो जस्तो काम र धन दौलतको आधारमा नागरिकहरुको वर्गिकरण हुने नेपाली समाजमा हामी जस्ता मध्यम वर्गको नागरिकहरुको लागि त सामाजिक जीबन प्रणालीको संरचना नै बडो रहस्यात्मक भएको पाएं । धेरै मध्यम वर्गीय नागरिकहरुको जीवन प्रणाली तहस नहस भएको छ । सम्पन्न बर्गको त जीवन नै बेग्लै छ । उनीहरुसँग धन दौलत छ जसरी बाँचे पनि भयो । धन र इज्जतलाई एकै सिक्काका दुइओटा पाटाको रुपमा मान्यता प्रतिस्थापन गरेको छ हाम्रो नेपाली समाजले । सम्पन्न बर्गसँग धन छ इज्जत छ र जीवन पनि छ । तर हामी मध्ययम बर्गकाहरु काम पनि छैन धन पनि छैन अलि अलि भएको इज्जत हो, त्यो पनि आफ्नो सामाजिक हैसियत बनाउन सँघर्ष गर्दागर्दै कुन बेला धूलो बन्छ पत्तै हुँदैन ।
हामी धेरै मध्ययम वर्गीय नेपालीहरुझै मैले मातृभूमिमा गरेको परिश्रम र संघर्षको असफल परिणामले स्वीकारेको तितो यथार्तता हो । यस्तै समस्या र परिस्थीतीलाई आत्मसाथ गर्दै बिदेशमा भौतारिरहेको अहिले आम नेपालीहरुको कथा र व्यथा हो । नेपालमा नै केही गरांै भन्ने भावना संचार माध्यमले सम्पुर्ण नेपाली बीचमा पु¥याउन सक्यो भने अवश्य पनि सम्पन्न नेपालको अवधारणा आगाडि लैजान महत्वपुर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
अन्त्यमा, बिदेशमा रहेका नेपालीलाई देश प्रतिको चिन्ता र देशलाई दिगो शान्तिमा पु¥याउनका लागि जुन पहल यस संचारले गर्ने जमर्को गरेको छ यो अत्यन्त सम्मान जनक तथा उदाहरणीय रहेको छ । स्वदेशबाट बिदेशमा रहेका सम्पुर्णलाई नेपालीपनको आभास दिने, आफ््नो ठाउँको जानकारी दिने जुन प्रयास छ, सम्पूर्ण विदेशवाट प्रकासित पत्रपत्रिका तथा अनलाइन मिडियाको पनि प्रमुख स्थान छ ।
शालिक राम डुम्रे निवर्तवान अध्यक्ष नेपाली जनसम्पर्क समिती, स्पेन
जिन्दगीका स्मरणहरु — डिक कार्की, एनआरएन स्पेन संस्थापक अभियान्ता